भविष्यलाई बुझ्ने क्षमताका धनी हुन्छन् यी ४ राशि हुनेहरु ! – List Khabar
Home / राशिफल / भविष्यलाई बुझ्ने क्षमताका धनी हुन्छन् यी ४ राशि हुनेहरु !
admin July 30, 2021 राशिफल Leaveacomment 98 Views
आधुनिक युगमा ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कर्मलाई विश्वास गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । धेरैले अहिले ज्योतिषसँग खासै सरोकार पनि राख्दैनन्, तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको जीवन राशी अनुसार चल्छ भनिएको छ । राशीले मानिसको गृह वा नक्षत्रमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिने गर्दछ । सत्य कुरा के हो भने मानिसहरुले समस्याको समाधान ज्योषितहरुबाट समाधान पनि गरेका छन् ।
कुन मान्छे कस्तो हुनसक्छ, वास्तवमा यी व्यक्ति कस्ता छन् जस्ता विषयको जवाफ ज्योतिषीको माध्यमबाट सजिलै समाधान गर्न मिल्ने र गोप्य कुरा पनि यसैबाट खुलासा गर्न मिल्ने भनिएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको जीवनलाई राशीफलले प्रभाव पार्ने गर्दछ । राशीफलमा मानिसको विशेष खुबी भएको कारणले गर्दा यसलाई धेरै पहिले देखी विश्वास गरिदै आइएको पनि छ ।
एक आलेखमा राशीको महत्व र खुवीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ , जसमा सबै राशी उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको र सबैभन्दा बलियो राशीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा बलियो र बलवान राशी ४ राशी रहेका छन् । यी राशीका मानिसहरु अरुले दबाएमा दबेर बस्नुपर्ने बाध्यता भने रहको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
लागौ, सबैभन्दा बलवान् ४ राशी तर्फ ।
मेष राशीका मानिसहरु अन्य राशीको तुलनामा एकदमै उर्जावान रहेका हुन्छन् भने सधैं काममा सक्रिय हुन्छन् । यो राशी भएकाले अरुलाई कहिल्यै पनि रोक्ने वा अल्झाउने काम गदैनन् ।
यस्ता राशी भएकालाई कसैले दिक्क लगाउने काम गरेमा यस्ता लाई मतलब गदैन् । कुनै पनि काम, कुरा आफ्नो मातहतमा राख्ने र आफ्नो निर्ण लागु गराउँन यो राशीका मानिसहरु लागिरहेका हुन्छन् । यदि यस्ता राशीहरु कसैप्रति प्रभावित भएमा आफ्नो जीवनको पाइलालाई बदल्न सक्दछन् । यी राशीका मानिसहरु कसैलाई भरोसा नराख्ने खालका पनि हुन्छन् ।
वृश्चिक राशीका मानिसहरु भावुकता खालका हुने कारणले गर्दा उनीहरुलाई कुनै कुरा सहन निकै मुस्किल पर्दछ । यस्ता राशी भएका मानिससँग एक अद्भुत क्षमता पनि हुन्छ, त्यो हो भविष्यको संभावित घटना ।
वृश्चिक राशीका मानिसहरु इमानदार र समर्पित खालका हुन्छन् । योग्य मानिसलाई यी राशीले सदैव इमान्दारीता देखाउँछन् तर जो धोकेबाज छन् ती व्यक्तिबाट चाहि यो राशीले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता राशी भएका मानिसहरु कहिल्यै पनि भावनामा बहेर कुनै निर्णय नलिने स्वभावका हुन्छन् भने बुद्धिमान पनि रहेका छन् । त्यस्तै यो राशीका मानिसहरु रोचक र जिज्ञासु हुनु कारणले गर्दा जीवनमा धेरै कुराहरु सिक्ने मौका पाएका हुन्छन् ।
मकर राशीलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट राशीको रुपमा लिइन्छ, यस्ता राशी भएका मानिसहरुसँग विभिन्न किसिमका क्षमता पनि हुन्छ , यी राशीका मानिसले जस्तोसुकै परिस्थीतिमा पनि आफूलाई सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्दछन् । सोच्ने र सम्झने क्षमतामा पनि यो राशी अग्रस्थानमा रहेको छ । यस्ता राशीका मानिसहरुले छिट्टै सफलता पनि हासिल गर्दछन् ।
Previous सपनामा यदि यी ८ चिजहरु खादै गरेको देख्नु हुन्छ भने चम्कनेछ तपाईको भाग्य !
Next विवादकै कारण २१ वर्षसम्म अदालतको चक्कर काटेर फेरि श्रीमानसँग बस्ने यी महिला!
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज ३ गते आईतबार इश्वी सन २०२१ सेप्टेम्बर १९ …